Janaayo 18, 2004
Madaxweyne Bush oo si taxadar leh u bilaabay xifdinta qudbo sanadeedka laga rabo inuu congress-ka Maraykanka u jeediyo habeenka talaadada ee 20ka January 2004 (State of Union Address).
Jimcihii ay taariikhdu ahayd January 9keeda ayuu Madaxweyne Bush bilaabay inuu tababar sii qaato sidii uu qudbad taariikhi ah oo anfacda asaga iyo himilooyinkiisa mustaqbalkaba. Sidoo kale ayaa ammaanka xarunta xildhibaanada ee loo yaqaan Capitol Hill la adkeeyay waayo waa habeenka keliya oo ay dawladda oo dhan meesha ku idishahay weliba kuwii lahaa silsiladda dhaxal talada maraykanka haddii uu madaxweynaha geeriyoodo habeenkaas waxba kama maqnaan doonaan. Waxaa kale oo iman doona gudooyeyaasha maxkamadda sare (Supreme Court) waxaa kale oo iman doona marti ay ka mid yihiin diplomaasiyiin ajnabi ah. Meesha waxaa ka maqnaan doona hal wasiir oo ka mid ah wasiirada madaxweyne Bush.
Maxay tahay sababta uu wasiirkaas (cabinet member) u maqnaandoono habeenkaas?
Waa taladii seegtay jabhadihii riday dawladdii Soomaaliya- wasiirkaas waxaa loogu talo galay in haddii amar ilaahay yimaado oo inta meesha joogtaayi wax ku dhacaan in aan sisiladdii dhaxalka madaxtinimada maraykanka aanay wareer iyo muran gelin oo asagaa wadanka maamulaya intii muddo ah si ku meelgaarka ah. Qofna ma ogola in wadanku noqdo dawlad la’aan sida Soomaaliya.
Khudbadani waa maxay?
Waa warbixin uu madaxweynuhu siinayo dhammaan xildhibaanada labada gole ee maraykanka sanadkii hal mar si uu ugu waramoxaaladda gobolada midoobay ee Ameerika hase yeeshee madaxweynayaasha maraykanka ayaa u isticmaala fursad ay dadka ku soo jiitaan, xildhibaanadana wax uga dhaadhacshaan, oo xataa hadda dadyowga adduunka kula hadlaan. Isku soo duuduuboo waxay u isticmaalaan inay himiladooda ku gaaraan ayagoo ku faana wixii guul ah oo ay hore u soo qabteen iyo waxa ay damacsan yihiin sanadka soo socda.
Sharcigee ku dhisan tahay khudbadan?
Dastuurka maraykanka qodobka 11naad qaybta 3xaad ayaa amraysa in uu madaxweynaha u waramo xildhibaanada labada gole sanadkii hal mar. Madaweynihii ugu horeeyay ee khudbadan aqriya waxaa uu ahaa Madaxweynihii kowaad ee maraykanka President George Washington January 8, 1790 dadka hortood ayuu ka qudbeeyay markaas sidaas ayay ku socotay ilaa uu joojiyay madaxweyne Thomas Jefferson oo yiri sidan ma fiicna waayo waxay u ektahay in aan boqor ahay oo kale wuxuuna bilaabay inuu warqado soo diro xildhibaanadana loo aqriyo taas oo socotay 100 sano
1913, Madaxweyne Woodrow Wilson ayaa soo horistaagay xildhibaanada oo soo nooleeyay caadadii soo hor istaaga. 1923, madaxweyne Calvin Coolidge ayaa noqday kii ugu horeeyay ee raadiyo u isticmaala khudbadan. 1935 Madaxweyne Franklin Roosevelt ayaa isticmaalay kelmadda State of Union markii u horaysay ka dibna waxa ay noqotay magaca qudbadda. 1947, Madaxweyne Trueman ayaa noqday kii ugu horeeyay oo khudbadan u isticmaala Television ka dibna madaxweyne Lyndale Johnson ayaa noqday kii ugu horeeyay ee qudbadan u bedela fiid ama marka dadka guryaha joogaan oo ay u badan tahay inay fiirsadaan television-ka (prime time).
Dadka u qora qudbadda madaxweynaha ayaa dhowaanahanba ku mashquulsanaa sidii ay u qori lahaayeen qudbad xiiso leh oo anfacda madaxweynaha si kastaba iyo inay ilaaliyaan in qudbadda aanay ku jirin wax aan la xaqiijin ama muran keeni kara sidii hore u dhacday markii uu madaxweynaha isticmaalay 16 kelmadood oo muran iyo wareer dhaliyay kuwaas oo ahaa
“ dawladda Ingriiska ayaa ogaatay in Sadaam Huseen uu ka raadsaday Afrika macdanta laga sameeyo hubka halista ah”
Warkaasi ma aha oo keliya in la xaqiijin waayay bal qubarada sirdoonka maraykanka ayuu ku noqday ceeb waayo ma ay jecla in dawladooda ku tiirsanaato xog ka timid dal kale ayagoo jooga. Khudbadan waa muhiim waayo dad badan oo maraykan ah oo ay weliba qaarkood aanay dhagaysanin wax war ah oo dhan iyo dadka adduunka kaleba waa ay dhagaystaan waxaa intaas sii dheer inay isla markiiba ku xigi doonto jawaabta deg degga ah ee xisbiga mucaaradka ah ee Demoqraadiga
Xisbigan ayaa ayagana maalmahan ku mashquulsan jawaab kulul oo waxkama jiraan ka dhigta guulaha iyo waxqabadka iyo himilooyinka uu ku faani doono madaxweyne Bush habeenka talaadada waayo haddii aanay si fiican uga jawaabin waxay ku noqon doontaa nabar gaar ahaan sanadkan 2004 oo ah sanadkii doorashada. waxaa kale oo ku xigi doonta falanqaynta arrintan ay falanqayn doonaan suxufiyiinta adduunka iyo weliba murashaxiinta u taagan doorashada madaxweynaha ee 2004.
Hab maamuuska xafladda
Khudbadan ayaa waxaa la socda protocol badan iyo kala danbayn aad u adag taas oo bilaabanaysa marka la casheeynayo waxaase ka daran sida loo soconayo iyo sida loo kala fariisanayo. Waxyaabaha yaabka leh ee xafladdan waxaa ka mid ah Senatoorada iyo shaqaalahooda oo ixtiraam dheeraad ah la siinayo. Inta xafaladan socotaa qof bixi karaa ma jiro sida loo baxayana waa nidaam. Inta qudbadda socoto waxaa meesha ka muuqanaya sacab badan iyo isu camirid. Sida uu madaxweyne Bush uga faa’iidaysto fursaddan dahabiga la arki doonaa.
Minnesota oo noqotay meesha afka Soomaaliga loogu qadarin badan yahay dibadaha .
Qore: Maxamuud Nuur Wardheere | Jan 12, 2004
Afka Soomaaliga ayaa noqday af jiritaankiisa aan la loodin karin ka dib markii la qoray 1972dii. Wuxuuna noqday mid ka horumarsan afaf badan oo aan la qorin ama afafka looga hadlo Guji...
Faafin: SomaliTalk Jan 18, 2003